BURMA DEVELOPMENT NETWORK (BDN) မြန်မာပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်:ွှToday Dr Naing Aung's words ယနေ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ပြောစကား
BURMA DEVELOPMENT NETWORK (BDN) မြန်မာပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ယက်
Transparency in Myanmar (Burma) is being sure of what we hope for and certain of what we do not see
ွှToday Dr Naing Aung's words ယနေ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ပြောစကား
လွန်ခဲ့သော နှစ် (၂ဝ) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး(ABSDF ) အဖွဲ့မှ သံသယဝင်သူ အယောက် (၁၅) ဦးခန့်အား သတ်လိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေး သင့်သည်ဟု ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ဆိုသည်။
''အရင်က ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ ထောက်လှန်ရေးတွေကိုလည်း အရေးယူနိုင်ဖို့ သားသမီးချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ ဝင်ကူညီပေးကြပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဟုတ်ပဲနဲ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ တစ်ဖက်ကလည်း အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ မှားသွားတဲ့ ဟာမျိုး ရှိမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗဟိုအနေနဲ့ မဟုတ်သော်ငြားလည်း တောင်းပန်ရမယ့် အနေ အထားပါ။ အဲလိုဟာမျိုးကို ပြောချင်တယ်။ ဒါကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ထောက်လှန်းရေးတွေ အနေနဲ့ကလည်း ဝိုင်းကူပြီးတော့ ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်။''ဟု ၄င်းကဆက်ပြောသည်။
၄င်းက ယခု တ၇ားစီရင်မှုသည် လွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေးစနစ်မျိုး မထွန်းကားသေးကြောင်းကိုလည်းစီကာပတ်ကုံးပြောပြီး အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဆိုသွားသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်သတင်းအသိုင်းဝိုင်းနှင့်နီးစပ်သော ရပ်ကွက်မှ ပြောကြားချက်အရ ဆိုလျှင် ဒေါက်တာနိုင်အောင်သည် ယခုလက်ရှိ သားပြောက်မိခင်ဘ၀များဖြစ် မျက်ရည်လည်နေကြရသော အေဘီအက်ဒီအက်ဖ်မြောက်ပိုင်းလူသတ်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရသူများ၏
နောက်ကွယ်မှ ငွေရေးကြေးရေး ပေးအပ်၇န်ကမ်းလှမ်းနေပြီး ကြေအေးမှုတစုံတရာ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ဘီဒီအန်မှ ကြားသိရသည်။
မှတ်ချက် ယခု ဓါတ်ပုံအား မြစ်မခမှ တောင်းခံထားသည်
Posted by BURMA DEVELOPMENT NET at 2:49 PM
BDN ဘီဒီအန်မှ စောင့်ကြည့်နေတယ်နော်
ဲWe are ready to shoot whatever you are posting
ဘီဒီအန် (BDN) အသံ
There isanew voice rise on behalf of the Democracy throughout Burma. That voice is human rights, organized to future public awareness, knowledge and understanding of the international declaration of democratic rights through communication by individual or group and literature, religion and culture. We possess our future. No one or any dictator needs to reform our democratic goal. The revolutionaries with true ideology must stand and defense for the oppressed people forever.
မြန်မာပြည်အနှံတလျှောက်မှာဒီမိုကေ၇စီကိုကိုယ်စားပြုတဲ.အသံဟိန်းဟိန်းညံထွက်ပေါ်လာပါပြီ။အဲဒီအသံတွေကတော့ယဉ်ကျေးမှုအရဘာသာရေးအရစာပေးရေးရာအတွေးအခေါ်နှင်.အချင်းချင်းနားလည်မှုတို.ကနေဒီမိုကရေစီနှင့်နိုင်ငံတကာလူအခွင်.အရေးများကြေငြာစာတမ်း တို.၏စံနုံန်းများနှင့်အညီအများပြည်သူတို.၏လိုလားလက်ခံစံထားမှုတို.မှအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသောလူ.အခွင်.အရေး၏မြည်ဟီးရိုက်ခတ်လာာသောအသံပင်ဖြစ်ပါသည်။ အများပြည်သူတို.မှပေါက်ဖွားလာသောကျွှန်ပ်တို.သည်ကျတော်ကျမတို.၏အနာဂတ်ကိုကျတော်ကျမတို.ကသာလျှင်ပိုင်ဆိုင်သည်။ကျတော်ကျမတို.၏ရည်မှန်းသောဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင်.မည်သို.သောအာဏာရှင်များမှပုံသွင်းထုလုပ်ဖန်တီးစရာမလိုအပ်ပေ။
View Point For 10 Kinds Of Facts For Succece အောင်မြင်ရေးအတွက် နည်းလမ်း ၁၀ခု
1- construction 2- competence 3- courage 4- communication 5- charm 6-compassion 7-confidence 8- contro 9- commitment 10-contentiment
Popular Posts of Blogger
ကျော်ဆန်း ရဲ့ဝါဒဖြန့် ချိရေး အင်ပါယာ Media empire
၊၂၀၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ တွင် ဗိုလ်မှုးချုပ် ဘ၀ ဖြင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ရာထူး ကို စတင်ရယူ စဉ်ကသူ၏ နိုင်ငံ တကာ မီဒီယာ ဗဟု သု တ မှ အတော် ပင...
နိုင်အောင် က ဧ၇ာဝတီ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော်ကို ၀ယ်လိုက်သည်ဟု သတင်းထွက် အသဲတွေယားစရာကြီး အောင်ဇော် (ဧရာဝတီ) ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ မနက်...
ရိုဟင်ဂျာ နောက်ဆုံး သတင်း
စစ်တွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရသတင်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၃၀၀ နာရီ...
DEBATE FOR VICE PRESIDENT IN NAYPYI DAW ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဒုသမ္မတ ခန့်အပ်ရန် နေပြည်တော်တွင် အကြီးအကျယ် ငြင်းခုံနေကြ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး အမှန်ပင် နုတ်ထွက်စာကို မေလ ၃ ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် နေပြည်တော် သမ္မတရုံးသို့ တင်သွင်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း နေပြည...
ဧရာဝတီ အနာဂတ်အတွက် စိတ်မချရသေး၊ မြစ်ဆုံဆည်အား မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ရမည်ဟု အာဏာရ USDP ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ပြောကြား ...
The real evidence in Sittwe
It is one of the evidences whichayoung Rakhaing was killed by terrorist Rohinagya group. အရေးကြီးနောက်ဆုံးရသတင်း အမြန်ဆုံး share ကြပ...
· အမျိုးသမီးငယ် ၁၃ ဦးကို စင်ကာပူတွင် အိမ်အကူလုပ်ရန် ပို့ဆောင်ပေးမည့် အကျိုးဆောင်ကို ဖမ်းဆီး ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် - ၁၃ မကွေးတိုင်း...
The story behind Viber
လက်ရှိခေတ်စားနေသော Viber Application အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ပိတ်ပင်သွားမည် ဆိုသည်နှင့် ဆက်လျင်း၍ နောက်ကွယ်မှ တရားခံမှာြ မန်မာမော...
Latest News from Sittwe စစ်တွေနောက်ဆုံးသတင်း
စစ်တွေ(ည၉နာရီ) ဘင်္ဂါလီအများစုနေထိုင်ရာ စစ်တွေတက္ကသိုလ်အနီးရှိ ဘုမေကျေးရွာသို့ အနီးအနားရွာများမှ ဘင်္ဂါလီများ လာရောက်စုရုံးနေကြသည်ဟု ရခို...
Emergency meeting news from Kyatpay Napyidaw
ြ ကပ်ပြေးနေပြည်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးသတင်း ၂၂ရက်မေလ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ရန်ကုန် ယနေ့ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်တွင် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရပ်ကျင်းပခဲ့ေ...
ဘီဒီအန် ညီကိုမောင်နှမများကိုပူးပေါင်းပေးပါ Please join BDN Family
88 GENERATION STUDENT'S DAILY CAMPAIGN
TO FIND MORE NEWS
Myanmar soldiers rape and try to kill Shan woman
What is happening in Myanmar judicial system
်ဲFight for citizne rights
Against the project in Lapan Daung
အစိုးရ၏ ထိုးစစ်ကြောင The result of GOV military op...
ရှမ်းမြောက် ပန်ဆိုင်းတိုက်ပွဲတွငIn the battle of P...
ဆေးရုံသွားတိုင်း ရောဂါကူးInfected in hospital
Daily Trouble of Myanmar Traffic Police
Open letter to retired regime by student activist,...
cracking lines in USDP
88 Generation Students hold press conference in Ya...
Lapandaung Mountain project needs to be stopped
Let you may take recount againစဉ်းစားစေချင်တယ် ဒေါ...
STRATEGY NEEDS TO BE CHANGED FOR LAPANDAUNG MOUNTA...
Authorities try to arrest demonstrators who want t...
STOP CIVIL WAR CAMGAIGN
A VOLCANO HAS TO BLOW UP IN LAPANDAUNG MOUNTAIN
General strike sets target date in India
Change the playstation
Authorities' employees turn back for desidents' ap...
The brillient speech by Australian Prime Minister
SOLDIERS ARE WORKING AS VENDOR
Myanmar army forces are using heavy guns and Howit...
The fifth Anniversary Of Saffron Revolution Ceremo...
Workers show their wishes infront of MWDC
မိုးသီးဇွန် အဲ့ဒိလို သေလို့ ရရင် မင်း ငါ့ရှေ့ မှာ ...
Demonstration will show infront of Defence ministr...
တာဝန်ရှိသူ များကို အရေးယူရမည် The responsibility p...
Today 88 result
Authorities ask money for census paper
Railway authorities must take responsibilities for...
The village closed with Yangoon has not seen Elect...
၄ ရက်ခိုးတာတန် ၃၀၀ Thieves run away
It is not reality act to retrun homeပြည်တော်ပြန် က...
A political party has to go to Court
Burma is not fruitful war palace
At the back door of Lapadawn Taung
ပ်ဒေါင်းအလံကို လွှင့်တဲ့ ဗကသ နှင့် ခေါက်သိမ်းထားချင...
Myanmar armed forces are ready to occupy KIA
Why does China exploite on Myanmar
Peace Mission of Myanmar President
New Substitution cabinet takes oath in Parliament...
Signature camgaign for killer to court in Mandalay...
Farmers are ready to march to fight for rights
ံHAPPY PRINCE PART ONE
They are not your relatives
ွှToday Dr Naing Aung's words ယနေ့ ဒေါက်တာနိုင်အော...
Retruned men in tricky point at the back door
Children at Madalay Railway Station
Wild Tiger and Hunter
Myanmar government hands over child soldiers to th...
City Municipal is doing mismanagement
Returned exiles boost in press conference
Zagabar makes trick on media ဇာဂနာ သတင်းထောက်များက...
BURMA DEVELOPMENT NET
We are the one to share for all of our view about injustice and unfair which are daily happening in Myanmar where military proxy party is ruling.
USATODAY.com News Top Stories နိုင်ငံတကာ သတင်းလေးတွေကိုပါ ၀င်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်
Translate for 100 language to your own style
We would like invite you to join us to change our land where military proxy party ruling in present.
BURMA DEVELOMENT NETWORK. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.